एक मायालु ईश्वरले संसारमा त्यस्तो दुष्टता कसरी हुन दिनुहुन्छ? |
एक मायालु ईश्वरले संसारमा त्यस्तो दुष्टता कसरी हुन दिनुहुन्छ?
एउटा उत्तम प्रश्न यो हो: “संसारमा यस्तो किसिमको ईश्वरले कसलाई अनुमति दिनुहुन्छ?” क्रूर परमेश्वर कि गल्ती? पक्कै पनि एक मान्छेले – भगवानलाई सृष्टि गर्नुभयो। मेरी बेकर एड्डीले भगवानलाई सातवटा समानार्थी शब्दहरू प्रदान गर्छिन् जसले यस “ठूलो मान्छे” लाई “आकाशमा” गलत धारणा राख्न छोडिदिन सोच्न सहयोग गर्दछ: मन, सिद्धान्त, आत्मा, आत्मा, जीवन, सत्य, र प्रेम। यी सबै एकवचनमा रेन्डर गरिएका छन्, र असीम छन्, जस्तो कि परमेश्वर एक र असीम हुनुहुन्छ।
यस्तै, त्यहाँ कुनै खराबीको लागि कुनै ठाउँ छैन, त्यहाँ गणितको सिद्धान्तमा गल्तीहरूको लागि ठाउँ भन्दा बढी छ। के तपाईं गल्तीको लागि सिद्धान्तलाई दोष दिनुहुन्छ? सिद्धान्तले गल्तीलाई अनुमति दिएको किन समय खेर गयो भन्ने प्रश्नमा समय व्यतीत भयो! सिद्धान्तलाई सच्याउनको लागि तपाईंले लामो समय गल्तीको लागि खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईंसँग यो जति लामो छ! जसरी संसारको पाप र बिरामीलाई गैरकानूनी मानिन्छ, परमेश्वरको व्यवस्थाको विपरित हो, हामी त्यसमाथि विजयी हुन सक्छौं।
च्रिस्टियन स्किनेचे के हो?
मेरीट बेकर एड्डीको शब्दहरूमा, च्रिस्टियन स्किनेचे पाठ्य विज्ञान विज्ञान र स्वास्थ्यमा धर्मशास्त्रको साँचोसँग हामी पढ्छौं: “ट्रीस्टियन स्किनेचेस भन्ने शव्द लेखकले ईश्वरीय उपचारको वैज्ञानिक प्रणालीको डिजाइन गर्नका लागि प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशको दुई भाग हुन्छन्:
यो ईश्वरीय विज्ञानको मनको आविष्कार ‐ चिकित्साको आध्यात्मिक भावनाको माध्यमबाट र सहयोगीको शिक्षाबाट, जुन मास्टरले वचन दिएका थिए।
वर्तमान प्रदर्शनले येशूका चमत्कारहरू विशेष गरी प्रबन्धमा आधारित नभएको प्रमाण प्रस्तुत गर्‍यो, तर उनीहरूले सदासर्वदा काम गर्ने ईश्वरीय सिद्धान्तलाई चित्रण गरे। यस सिद्धान्तको संचालनले वैज्ञानिक व्यवस्थाको शाश्वतता र अस्तित्वको संकेत गर्दछ।”
“च्रिस्टियन स्किनेचेले सिकाउँछ केवल आत्मिक र ईश्वरीय हो, मानव होइन। च्रिस्टियन स्किनेचेर अवरिंग र ईश्वरीय हो; चीजहरूको मानवीय भाव चल्छ किनकि यो मानव हो।”
यस्तै रूपमा प्रयोग भए पनि, क्रिस्टियन स्किने अनुयायीहरूसँग सम्प्रदाय वा संप्रदाय होइन, न त बोस्टन एमए मा साइन्टिस्टको क्राइष्टको प्रथम चर्चको ट्रेडमार्क हो!
“च्रिस्टियन स्किनेचे परमेश्वर विश्वव्यापी, अनन्त, ईश्वरीय प्रेम हुनुहुन्छ, जसले परिवर्तन गर्नुहुन्न र कुनै खराबी, रोग र मृत्युको कारण दिनुहुन्न।” जस्तो कि हामी यो बुझ्छौं, क्रिस्टियन स्किनेचेले ब्रह्माण्डको नियमहरू (आध्यात्मिक) समावेश गर्दछ, र त्यसैले जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै व्यक्तिले सञ्चालन गर्न सक्दछ – जसले येशूका शिक्षाहरूसँग मेल खाए, जसले रोमी सिचुरियनको प्रशंसा गरेका थिए जसलाई सबै इस्राएलीहरूले भन्दा बढी विश्वास गरेका थिए। , र जसले राम्रो सामरीको उखानमा नम्र सामरीलाई आफु-धर्मी पुजारी र लेवीहरू भन्दा धेरै “इसाई” भनेर चित्रण गरे।
“कि परमेश्वरको निम्ति सबै मानिसहरू एक समान हुन्।” — प्रेरित
तपाईं किन स्वतन्त्र हुनुहुन्छ?
श्रीमती एडीले घोषणा गरे कि च्रिस्टियन स्किनेचे ईश्वरीय हो, मानव होइन। जस्तो कि यो संभवतः मानव संगठनमा सीमित गर्न सकिदैन। उनले चर्चलाई बिचारको पेशाको रूपमा नभई उपचारका लागि गाडीको रुपमा स्थापित गरे। उनले मान्यता पाई कि एउटा शक्तिशाली, केन्द्रीकृत संगठनले प्रेरणालाई दबाउँछ, र त्यसैले उपचार गर्दछ। हामीले यो सत्य फेला पारेका छौं। हाम्रो स्वतन्त्रताले जीवनशैलीलाई उत्प्रेरित गरेको छ जुन हामी बोस्टनमा संगठनको शाखा चर्चमै रहेको भए सम्भव हुने थिएन।
के साइन्टोलजी चरिस्टियन स्किनेचे जस्तो छ?
दुई नाममा विज्ञान मात्र समानता हो। तल केहि फरक मतभेद छन्:
च्रिस्टियन स्किनेचेलाई मेरी बेकर एड्डीले पत्ता लगाएर स्थापना गर्नुभयो; साइन्टोलजी पछि एल। रोन हबार्ड द्वारा स्थापित भयो।
श्रीमती एडी प्रकाशको माध्यमबाट च्रिस्टियन स्किने पुगे, र यसलाई ईश्वरीय मान्नुभयो, मानव होइन। उनले यो प्रकटीकरणको लागि उनको एकमात्र सन्दर्भ बाइबलको रूपमा दावी गर्छिन्; श्री हुबार्ड आफ्नो बुद्धिमत्ता र समझका माध्यमबाट विचार र अभ्यासहरूको सेट डायनाटिक्समा आइपुगे: उनी कुनै खास धार्मिक प्रभावको दावी गर्दैनन्।
श्रीमती एड्डीले विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक, विज्ञान र स्वास्थ्यको साथ धर्मशास्त्रको साँचोको साथ बाइबल अध्ययन गर्न जोड दिए। श्री हबार्डले बाइबलमा त्यस्तो कुनै जोड दिनुभएन।
श्रीमती एड्डीले क्रिस्टियन स्किचेचेको चरित्रलाई गहिरो प्रभावका साथ क्रिस्ट जीसको अत्यधिक आदर, जीवन, उपचार र शिक्षण, कष्ट र अन्तिम पुनरुत्थान समात्नुभयो र पत्रमा र आत्मामा विशेष गरी पाठ्य पुस्तकको दोस्रो अध्याय हेर्नुहोस्, प्रायश्चित र युकेरिस्ट”; श्री हबबार्ड? हामी इमान्दारीपूर्वक स्वीकार गर्छौं, हामीलाई थाहा छैन, तर साइन्टोलजी वेबसाइटहरूको कर्सर झलकमा यसको थोरै प्रमाण देख्यौं।
खाण्यापिण्यात आणि झोपण्यापेक्षा वैद्यकीय मदत मिळविण्यासारखे पाप नाही! महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण जे काही करत आहोत त्यामध्ये देवाला सर्वोच्च मानण्याचा प्रयत्न करणे. आमचा विश्वास आहे की, विशेषत: मुलांच्या बाबतीत, जर चक्रिस्टियन स्किनेचे उपचारांतून एखादी आक्रमक शारीरिक समस्या लवकर निर्माण होत नसेल तर वैद्यकीय डॉक्टरांकडून मदत घेणे शहाणपणाचे आहे.
च्रिस्टियन स्किनेचे उपचारांमध्ये, पहिली पायरी म्हणजे श्रद्धा कमी न करणे, भीती दूर करणे होय. आपला देव एक प्रेमळ देव आहे आणि तो आपल्याला कधीही सोईस्कर सोडत नाही आणि त्यात डॉक्टरांच्या कार्यालयात किंवा रुग्णालयातही समावेश आहे!
वैद्यकीय विज्ञान इतके प्रगत असल्यास, उपचारांसाठी च्रिस्टियन स्किनेचे का वापरावे?
आमच्या वेबसाइटवर सूचीबद्ध प्रशंसापत्रे पहा. वैद्यकीय शास्त्राच्या “असाध्य” निर्णयाला न जुमानता च्रीस्टियन स्किनेचे उपचारांमुळे त्यांना बरे केले गेले. च्रिस्टियन स्किनेचे अधिक प्रभावी आणि पूर्ण आहे कारण ते केवळ लक्षणेच काढून टाकत नाही तर समस्येशी संबंधित कोणताही सुप्त भीतीही विरघळवते. क्रिस्टियन स्किनेचे उपचार हा “इमॅन्युएल किंवा” आमच्याबरोबर देव “, एक दैवी प्रभाव” (विज्ञान आणि आरोग्य) यांचे लक्षण आहे, आणि अशाच प्रकारे हे स्पष्ट आहे.
जे होस्, यदि तपाइँ कसैलाई च्रिस्टियन स्किनेचे उपचारको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ भने, केहि पनि नसक्नुहोस्। तपाईले सोध्नु भएको नैतिक इमान्दारीमा तपाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भनेर निश्चित हुनुहोस्। श्रीमती एडीले यस कुरालाई सशक्त रूपमा बनाउँदछ: “संक्रमित डाक्टरलाई दुःख दिइनु राम्रो हो ईमान्दारीय विज्ञानको आवश्यकताहरू नमान्ने मान्छेले मानसिक झुकाव राख्नु भन्दा तपाईंसँग जाँदा बिफरको साथ। ” (विज्ञान र स्वास्थ्य)
कुनै पनि संगठनले त्यस्तो आज्ञाकारिता प्रमाणित गर्न सक्दैन।
के तपाईं बिरामी हुनुहुन्न भन्ने ढोंग गर्नु मूर्खतापूर्ण छैन जब प्रमाणहरूले तपाईं आफू भएको प्रमाण दिन्छ?
हो, यो मूर्ख छ, तपाईं को लागी बिरामी छैन जब बहाना गर्न खतरनाक पनि। तर च्रिस्टियन स्किनेचेको सही अभ्यास नाटक गर्नदेखि टाढा छ! यो एक अपरिवर्तनीय सिद्धान्त होल्डिंग हो, जसरी गणितज्ञले उनीहरुलाई सत्य हो कि भनेर थाहा छ, समस्या समाधान नभएसम्म। एक गणितज्ञ स्वीकार गर्न डराउँदैनन् उनले आफू अझै समस्याको समाधान गरिसकेका छैनन्, न त कुनै इसाई वैज्ञानिकले “झूटको बारेमा सत्य कुरा बोल्न” डराउनु पर्छ।
श्रीमती एडीले भने, “यदि तपाईं ‘म बिरामी छु’ भनेमा दोषी ठहरिनुभयो भने।” तर उनी मानसिक युद्धको मैदानलाई आफैंमा सोचबिचार गर्दैथिएकी थिइन्, पर्यवेक्षकहरूको संसारमा व्यावहारिक उपयोग नभएको हुन सक्छ कि च्रिस्टियन स्किनेचे काम गर्दछ। तपाईंको कल्याणको बारेमा चिन्तित केही मायालुलाई केही गलत छ भनेर इन्कार गर्दा डर बढ्दो छ, र विज्ञान होईन किनकि यो प्रेम छैन!
च्रिस्टियन स्किनेचेमा, जब मसँग समस्या छ वा म चिकित्सककहाँ जान्छु म दोषी महसुस गर्छु?
“महत्त्वपूर्ण भाग, क्रिस्टियन स्किनेचे मुटु र आत्मा, प्रेम हो।” – विज्ञान र स्वास्थ्य
केवल क्रिस्टियन स्किनेचेको हरामी मात्र तपाईंलाई दोषी महसुस गराउन सक्छ। दोषी व्यक्तिमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्नका लागि झूटा भविष्यवक्ताको माध्यम हो। धार्मिक संगठनहरू आफ्नो खास विश्वास प्रणालीको औचित्य प्रमाणित गर्न मानिसहरू के विश्वास गर्छन् भनेर नियन्त्रण गर्न कोशिस गर्छन्। थोमा जेफरसनसँग हामीले “परमेश्वरको वेदीको कसम खाएर मानव मनमा सबै प्रकारका अत्याचारको अनन्त दुश्मनी राख्नुपर्छ।”
इसाई वैज्ञानिकले डाक्टरलाई भेट्न वा औषधी सेवन गर्दा वा कुनै पनि प्रकारको समस्याको लागि दोषी महसुस गर्नु घृणा हो। केवल मानवीय इच्छाको प्रयोगले त्यस्ता ट्राभस्टी ल्याउन सक्छ! च्रिस्टियन स्किनेचे विश्वास प्रणाली हैन। कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले यसलाई अर्कोमा लागू गर्न प्रयास गर्ने ब्रह्माण्डको कानूनको साथ गडबड छ।
“जब ईश्वरीय आदेशमा हस्तक्षेप गरिन्छ तब मानिसको अधिकारहरू आक्रमण हुन्छन्, र मानसिक अपराधको कारण यो अपराधको कारण ईश्वरीय दण्ड भोग्नुपर्दछ।” – विज्ञान र स्वास्थ्य
अन्य मानसिक विधिहरुबाट के भिन्नता छरिस्टियन स्किनेचे?
पुस्तक पसलहरू स्वयं सहायता पुस्तकहरूले भरिएका हुन्छन् जसले पाठकहरूको अनुभव सुधार गर्न मानसिक साधन प्रयोग गर्दछ। स्पष्ट रूपमा, तिनीहरू केही हदसम्म काम गर्छन् र आत्म-विश्वास सुधार गर्दछन्, अन्यथा तिनीहरूले लोकप्रियता प्राप्त गर्दैनन्। सहि च्रिस्टियन स्किनेचेस अभ्यासमा, यसको प्रभावकारिताको प्रत्येक प्रदर्शनले व्यक्तिलाई एक खुफियाको ज्ञान, उसको घनिष्ठता र प्रेमको साथ छोड्दछ। यसले उसलाई वा उनीलाई यो खुफियामा बढी निर्भर बनाउँदछ, कम हुँदैन, र उहाँप्रति bणी।
उदाहरणको लागि, यदि तपाईंलाई एक भीडभाड क्षेत्रमा एक पार्किंग स्थल चाहिएमा, मानसिक साधनहरूको धेरै प्रणालीहरूले भिजुअलाइजेशन र सकारात्मक प्रत्याशाको प्रविधिहरू प्रदान गर्छन्। जब उत्तम पार्किंग स्थान चमत्कारी ढंगमा देखा पर्दछ, तपाईं आफ्नो क्षमतासँग रमाउनुहुन्छ। सहि च्रिस्टियन स्किनेचेसमा तपाईले आफ्नो मनसायलाई प्रश्न गर्नुहुनेछ कि यो स्वार्थी वा मनपर्दो होइन। त्यसो भएमा तपाईले यो आशा गर्नुहुनेछ कि दिमाग, जसले सबै जान्दछ, तपाईका लागि बाटो खोल्छ। यदि पार्किंग स्थल देखा पर्‍यो भने, यो उहाँको प्रेमको मान्यता हो, र उहाँको शासनको मान्यता हो, “प्रत्येक कुरामा तिनीहरूको भलाईको लागि गर्नुहुन्छ जसले उहाँलाई प्रेम गर्दछ।” (सेन्ट पल)
याद गर्नुहोस् कि पहिलेको केसमा तपाईले चाहानु भएको कुरा पाउनु हुन्छ, तर केहि अप्रत्याशित परिस्थितिको कारण तपाईका लागि उत्तम नहुन सक्छ। पछिल्लो केसमा, हेलममा असीम बुद्धिमत्ताको साथ, त्यसो भन्नुको लागि, तपाईंको आवश्यकता केवल यदि तपाईंलाई उत्तम छ भने मात्र प्रदान गरिनेछ। यस कारणका लागि, यो अपरेशनको एक सुरक्षित मोड हो, जबकि अघिल्लो केसमा, तपाईं मात्र आफूले चाहेको कुरा पाउनुहुन्छ, अप्रत्याशितबाट कुनै सुरक्षा छैन।
हामी यो सहि क्रिस्टियन स्किनेचेको अपरेसन मोड वेसहावर, क्राइष्ट येशूसँग मिल्दछौं भनेर बुझ्दछौं।
तपाईंको चर्च कसरी भिन्न छ?
धेरै मानिसहरूले सोधेका छन् कि प्लेइनफिल्ड चर्च कसरी बोस्टन सम्बद्ध शाखा चर्चहरू भन्दा फरक छ। यो लेख केहि अधिक महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू हाइलाइट गर्न अभिप्रेरित छ।
अभ्यासमा यी भिन्नताहरू क्रिस्टियन स्किनेचेले श्रीमती एड्डीको शुद्ध विज्ञान मन पराउने सबैको लागि कार्यको कलको रूपमा लिनुपर्दछ। यी भिन्नताहरू रेकर्ड गर्नु यस समयमा मानिसहरूका लागि र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि पनि हो। “घस्रने चीजहरू” बोस्टन संगठनमा छिर्नुभयो किनकि तिनीहरू जागा रहेको थिएन र खराब काम गर्न सतर्क थिए। यदि हामी सचेत छैनौं भने, दुष्ट, त्रुटि, वा “मानव दिमाग” फेरि भित्र पस्नेछ र नष्ट गर्न कोशिस गर्नेछ छृस्टियन स्किनेचे।
हामी म्यानुअलको 88 औं संस्करणको प्रयोग गर्दछौं, अन्तिम संस्करण मेरी बेकर एड्डीले अधिकृत गर्‍यो।
हामी भगवानलाई जवाफ दिन्छौं, बोस्टनको एउटा बोडलाई होइन। हामी जे गर्छौं, हामी आफैलाई सोध्छौं कि भगवानले यसलाई स्वीकृति दिनुहुन्छ, र त्यसो भए श्रीमती एडीले अनुमोदन गर्नुहुन्छ भने।
हामी आफ्नै पाठ लेख्छौं र आफ्नै पत्रिका प्रकाशित गर्छौं। यसको लागि निरन्तर प्रदर्शनको आवश्यकता छ।
हामी दैनिक रूपमा हेर्दछौं, श्रीमती एड्डीको घरमा गरिएको थियो।
हामी आध्यात्मिक संगठनलाई कायम राख्न कोसिस गर्छौं। कामहरू गर्न कुनै रातो टेप छैन। जब कुनै राम्रो विचार हुन्छ, छिटो निर्णय गरिन्छ।
प्रारम्भिक कामदारहरूको लेखोटहरू यहाँ पढ्नको लागि उपलब्ध छन्। त्यहाँ कुनै “अनधिकृत” साहित्य छैन, कसैले तपाईलाई के पढ्न वा पढ्न सक्दैन भनेर भन्दैन।
बोस्टन संगठनमा, कक्षा निर्देशन दस दिनको लागि हो, र यो केवल कागजमा थियो। प्लेनफिल्डमा निर्देशन अन्तर्क्रियात्मक र नियमित छ; यो केवल दस दिनको लागि मात्र होईन।
हामी जो अनौंठो हुन्छौं। हामी केवल मैरी बेकर एड्डीको नेतृत्व अनुसरण गर्दछौं। त्यो हामीमा केन्द्रित छ। हामी मतभेदहरूको बारेमा कुरा गरिरहेछौ किनकि मानिसहरूले सोधेका छन्।
मेरील्याण्डबाट — यहाँ जिम्मेवारीको ठूलो भावना छ जुन मसँग आउँदछ जुन अन्य चर्चमा थिएन। त्यहाँ सबथोक केवल पाठ पढ्ने र आइतवारको चर्च जाने बारेमा थियो; कुनै काम गर्नुपर्दैनथ्यो। तर यहाँ, हामी प्रत्येक दिन काम आशा गर्दछौं। यसैले हाम्रो साक्षी मिटिंगहरू यति फरक छन्, किन कि हामीले के सिकिरहेका छौं र हामी के अभ्यास गरिरहेका छौं, र नतिजा के हुन्छन् भनेर हामी साझेदारी गर्न सक्षम छौं। अर्को चर्चमा, साक्षी सभाहरू ठीक विपरित थिए – कसैलाई पनि केही भन्नुपर्दैनथ्यो किनभने कोहीले केही गरिरहेका थिएनन्। र यो जिम्मेवारीको साथ, परमेश्वरको शक्तिको ठूलो समझ आउँदछ, किनकि हामी जान्दछौं केहि गर्न सँधै गर्न सकिन्छ – हामीले यहाँ बस्नुपर्दैन र जे गलत छ त्यो लिनुपर्दैन – हामी यसको बारेमा केहि गर्न सक्छौं।
जर्मनीबाट — यहाँ प्लेनफिल्डमा त्रुटि फेला पर्‍यो र त्यसपछि “ईश्वरीय प्रेम हो” भन्ने नभई सत्य र प्रेमको माध्यमबाट आउँदछ, र सबै कुराको लागि चकित पार्दै, पोल्ल्यान्ना मनोवृत्ति संग। यहाँ हामीलाई त्रुटि उजागर गर्न, यसलाई हेर्नुहोस्, र यसलाई ठीक सेट गर्न सिकाइएको छ।
क्यालिफोर्नियाबाट — शाखा चर्चहरूमा जहिले पनि एक विशिष्टता थियो, र सबै रमाईलो र राम्रो थियो; तर यहाँ प्लेइनफील्डमा, यो वास्तविक छ। तपाईं यसमा ठोस सत्य महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। सबै ती विचित्रताले धेरै पापहरू ढाक्छ। हामी निको हुन चीजहरू बाहिर निकाल्छौं।
जर्जिया बाट — संगठन मा, कसैलाई नैतिक परिवर्तनहरू व्यवहार गर्दैन जुन निको पार्ने साथ आउँदछ। कसैले पनि कोही स्वार्थी, वा अहंकारी, वा त्यस्तो केहि कुराको बारेमा कुरा गरेन। मैले यस्तो सम्बोधन गरेको जस्तो कुनै कुरा कहिले पनि सुनेन – कुनै पनि व्यवसायीले मलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने केहि पनि उल्लेख गरेन। यो सँधै थियो, “प्रेमले काम गरौं।” तर त्यहाँ परिवर्तनहरू हुनु आवश्यक छ। श्रीमती एडी चरिस्टियन स्किनेचेच चरित्र सुधारको व्यवहारको बारेमा कुरा गर्छिन्, आरामदायी मात्र भएन। त्यसकारण “म एक क्रिश्चियन साइन्टिस्ट हुँ र सबै कुरा ठीक छ” भन्ने सोचाइ राख्नु एकदम खतरनाक छ, जब सबै कुरा ठीक छैन।
क्यालिफोर्नियाबाट — मेरी आमाले मलाई प्लेनफिल्डको बारेमा बताउनुभयो। उनले मलाई प्लेनफिल्ड चर्च पत्रिकाको एउटा प्रति दिइन्, र मैले पढ्न थालें – र मैले त्यहाँ कुनै दोषी महसुस गरिनँ। म सँधै अन्य मण्डलीमा दोषी महसुस गर्छु, तर यहाँ होइन।
पेन्सिलभेनिया बाट — यस चर्चमा पशु चुम्बकत्वको शिक्षा एकदम स्पष्ट छ। मैले पढेका सामग्रीहरू स्पष्ट थिएनन्, यो सबै सडकको बीचै थियो। यहाँ तपाईंसँग बीचको कुनै सडक छैन, र त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ।
जर्मनीबाट — प्लेनफिल्ड व्यवसायीसँग काम गर्दा मलाई सधैं काम गर्नका लागि केही दिन दिईन्छ। तपाइँको समावेश छ – यो चलिरहेको वर्ग निर्देशन जस्तै हो।
जर्जिया बाट — प्लेनफिल्डले भगवानलाई प्रथम राख्नुको महत्त्वलाई जोड दिन्छ – भगवान पहिलो हुनुपर्दछ। मैले सँधै सब भन्दा पहिले पाठ नै पढिनँ – हुन सक्छ म यसलाई पछि गर्छु, वा यसको केही अंश गर्छु। तर यहाँ, भगवान पहिलो हुनुहुन्छ; हामीले उहाँलाई पहिलो राख्नु पर्छ – त्यसपछि तपाईले सिकिरहनु भएको प्रयोगको व्यावहारिकता। तपाईंको दिन मार्फत यी साना व्यावहारिक चीजहरू जीवन परिवर्तन गर्दैछन्, विज्ञानको अभ्यास गर्ने तरीकाले।
भर्जिनिया बाट — यस चर्चको बारेमा केही स्फूर्तिदायी कुरा के छ भने सबै कुरा खुला र इमान्दार छ, सबैले चीजहरू साझा गर्छन्, त्यहाँ कुनै रहस्य हुँदैन र सबैले लाभ उठाउँछन् जुन सबैले बोले र अनुभव गर्दछन्। त्यो कुनै गर्वको साथ जान्छ। तपाइँ जान्नुहुन्छ जब कोही वास्तवमा केहि माथि हुन्छ, जब तिनीहरूले यसको बारेमा कुरा गर्छन् र देख्न सक्छन् यो त्रुटि थियो, र यो थिएन।
न्यू योर्क बाट — प्लेनफिल्ड चर्च यसको वित्तीय प्रबन्ध गर्न आर्थिक जिम्मेवार छ। बोस्टन चर्च आफैंमा दिवालिया हुँदै थियो, र उनीहरूले केहि गलत गरेका थिए भनेर समेत स्वीकार गर्दैनन्।